Obere Igwe Grid, Obere Igwe Ike Grid, Obere Ala Nyocha Igwe N'uba si China
Nkọwa:Obere Igwe Grid,Obere Igwe Ike Gini,Obere Igwe Grid Ndabere,Obere Grid Energy Systems,,
Obere Igwe Grid,Obere Igwe Ike Gini,Obere Igwe Grid Ndabere,Obere Grid Energy Systems,,
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Obere Igwe Grid
Ngwaahịa nke Obere Igwe Grid , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Obere Igwe Grid , Obere Igwe Ike Gini suppliers / factory, wholesale high-quality products of Obere Igwe Grid Ndabere R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Obere Igwe Grid Ngwa
Oghere ike fotovoltaic kesara, usoro nchịkọta nke ike panel nwere ike ịdabere na ụkpụrụ nke fotovoltaic . Ọ bụ usoro nchịkwa ike nke na-agbanwegharị ike anyanwụ dị ka ọkụ eletrik. Ọdịdị nke njikọ nke njikọ anwụ nke anyanwụ na-agbanwe ike anyanwụ na ike eletrik n'enweghị na-agafe na nchekwa nke ike batrị, ma na-eziga nzere ọkụ eletrik na-eme mgbe ọ na-ezute ibu ọrụ ma ọ bụ na ọ dịghị ibu ọrụ na grid site na njikọ ejiri ntụgharị. Ike mmeputa dị obere. Mmetụta dị ala na arụmọrụ dị elu; Ruo n'ókè ụfọdụ, ọ nwere ike ịmelata nchekasị ọkụ eletrik. Ike dị ọcha, efu efu; Enweghị mkpọtụ, enweghị mmetụta na gburugburu ebe obibi ọkụ ọkụ; E nwekwara ihe mkpuchi mkpuchi ụfọdụ. Mfe ngwa ngwa na njem; Ugboro oge ego, uru oge dị irè; Nnukwu ntụkwasị obi, ogologo ndụ, nwere ike ịgafe ihe karịrị afọ 25. Mee ka ụlọ obibi, ìhè anyanwụ, ụlọ nchara ihu igwe, ụlọ ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ na-ekpocha elu ụlọ. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ike ike na ike zuru ezu iji ejiji usoro na oke mmepe atụmanya. Ọ na-akwado ụkpụrụ nke ikike dị nso dị nso, njikọ chiri anya na ntughari, ntughari dị nso na iji ya mee ihe, nke nwere ike ọ bụghị nanị na-eme ka ikike nke ụlọ ọrụ fotovoltaic dị n'otu nke ọma dịkwuo mma n'ụzọ dị irè, kamakwa ọ ga-edozi nsogbu nke ike nkwụsị. ụgbọ elu na njem dị anya.
Obere Igwe Grid Ndabere
Obere Grid Energy Systems